Ankara Istanbul Lozabe hafainganam-pandeha lalamby lalana | RayHaber | raillynews
Sarintany fiaran-dalamby haingam-pandeha ambony Ankara Istanbul: 9 mijanona eo amin'ny sisin'ny fiaran-dalamby ao Ankara Istanbul dia misy marika toy ny Polatli, Eskisehir, Bozuyuk, Bilecik, Pamukova, Sapanca, Izmit, Gebze ary Pendik. Ny zotram-pandeha haingam-pandeha ambony ao Ankara-Istanbul dia hampidirina any Marmaray miaraka amin'ny tsenan-javabohitra any Pendik. Ny fitaterana mitohy dia hatolotra hatrany Eropa ka hatrany Azia. Ho fanampin'izany, amin'ity vaovao ity izay ahitanao ny fiaran-dalamby fiaran-dalamby any Ankara Istanbul sy fampahalalana hafa, dia hanome anao fampahalalana isan-karazany momba ny fiaran-dalamby Istanbul Ankara izay ampiasaina be dia be ianao. Raha te handeha avy any Istanbul mankany Ankara haingana sy am-pilaminana ianao dia tokony hisafidy lamasinina hafainganam-pandeha ambony. Ohatrinona no lafo ny tapakilan'ny lamasinina haingam-pandeha ambony Ankara-Istanbul, azo atao ve ny mividy tapakila fiaran-dalamby mankany Ankara-Istanbul? Nanangona ny antsipiriany rehetra momba ny garan-dalamby haingana izahay Ankara Istanbul…
Ankara Istanbul Lozabe hafainganam-pandeha Eskisehir Sakarya Lalana
İSTANBUL ESKİŞEHİR 2019 SPEED TRAIN TICKET PRESES
Istanbul Eskişehir Fotoam-piaretan-tena haingana: 2 Ora 40 Minitra
İSTANBUL KONYA 2019 HARAKA INDRINDRA INDRINDRA
Istanbul X Konya Fiaran-dàlamby haingana: 4 ora 20 minitra
Istanbul Ankara Fotoana hafainganam-pandeha ambony: 4 Ora 20 Minitra
ANKARA KONYA 2019 SPEED TRAIN TICKETS PRESES
Ankara Konya Ny ora fiaran-dalina haingana: 1 ora 55 minitra
ANKARA ESKISEHIR 2019 SPEED TRAIN TICKET PRESES
Ankara Eskişehir Fotoam-piaramanidina haingana: 1 Ora 36 Minitra
ESKİŞEHİR KONYA 2019 SPEED TRAIN TICKET PRESES
Eskişehir Konya Fiaran-dalamby haingam-pandeha: 1 Ora 45 Minitra
TORO LALAN-TSORATRA AZO ANTOKA ISTANBUL ANKARA
Ireo mpandeha izay te handehandeha eny Ankara amin'ny lamasinina misy haingam-pandeha dia handoa 70 liras toy ny saran-dalan'ny tapakila. Ny fotoana voalohany amin'ny fiaran-dalamby haingam-pandeha any Istanbul Ankara, izay hanao sidina 7 isan'andro, manomboka amin'ny 06:45 hariva avy any Pendik ary hifarana amin'ny 17:30 ny fotoana farany.
Ny serivisy fiaramanidina hafainganam-pandeha dia miala any Istanbul (Pendik) ary tonga any amin'ny gara be any Ankara High Speed ​​(ATG). Ireo mpandeha izay te handeha mivezivezy any Istanbul mankany Ankara amin'ny lamasinina hafainganam-pandeha dia handoa 70 liras ho vidin'ny tapakila. Ny fotoana voalohany amin'ny fiaran-dalamby ao Istanbul Ankara, izay hanao sidina 7 isan'andro, manomboka amin'ny 06:45 manomboka any Pendik ary hifarana amin'ny 17:30 ny fotoana farany. Ny faharetan'ny dia dia 4 h 15 min. Ny serivisy fiaramanidina hafainganam-pandeha dia miala any Istanbul (Pendik) ary tonga any amin'ny gara be any Ankara High Speed ​​(ATG).
Fiovana eo amin'ny lalana mankany Bursa Busines (Sarisam-piaramanidina vaovao)
Eskisehir Konya Ny tapakila tapakila tapakila haingam-pandeha hafainganam-pandeha sy sarintany
Samsun-Ankara fiarandalamby haingana dia haingana! Toerana voatondro
dalamby indroa haingana
Rahoviana no hisokatra ny seranam-piaramanidina avo Ankara-Istanbul
Tetikasan-dalamby High School Ankara-Istanbul